Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 32)
Le yiHuawei G8 entsha
IHuawei ibhengeze izinto ezintsha ezintsha ngosuku lokuqala lwe-IFA 2015, phakathi kwayo iHuawei G8 entsha imile, indawo esiphakathi / ephezulu.
Dibana nokubukela kweHuawei, iswatchwatch ye- € 399
I-Huawei Watch ngoku iyafumaneka ukuba ithengwe ukusukela namhlanje nge-399 euros kwimodeli yayo yesiseko kwaye ifika ivela kwi-IFA elungileyo eBerlin.
Konke malunga ne-Xperia Z5, i-Xperia Z5 compact kunye ne-premium ye-Xperia Z5
U-Sony usizisela i-Xperia ezintathu ze-smartphones ngekhamera ekhawulezayo ye-autofocus kwiplanethi, inzwa yeminwe kunye neentsuku ezimbini zobomi bebhetri.
Le yi-Asus ZenWatch 2
Siyaqhubeka neendaba ezinxulumene ne-IFA eBerlin ukuthetha nge-ASUS entsha enxibekayo, i-ASUS ZenWatch 2.
Le yiArchos Diamond Plus
I-IFA 2015 eBerlin sele iqalile kwaye abavelisi abaninzi bazise izinto zabo ezintsha, ezinje ngeArchos Diamond Plus entsha evela kwiArchos.
I-Acer Predator 8 GT-810, yazisa ithebhulethi entsha kubadlala umdlalo
Sele sizibonile ezinye zeendaba, ezinjengeMate S entsha evela eHuawei kwaye ngoku lithuba lika-Acer elisothusileyo ngexesha lokunikezelwa kwalo ngokubonisa i-Acer Predator 8, ithebhulethi yokudlala.
Uyisebenzisa kanjani i-lock yeminwe kuyo nayiphi na i-Android nokuba ayinayo inzwa yeminwe
Ukufaka isicelo sokutshixa iminwe yeminwe nakweyiphi na i-Android
UMeizu ufuna ukujongeka njenge-Apple yonke imihla
UMeizu upapashe i-logo yakhe entsha kunye nesicwangciso esitsha esiza kuthathwa yinkampani kule minyaka izayo, ukuba yi-Apple ngakumbi kunangaphambili.
U-Huawei ubhengeza ngokusesikweni iMate S.
IHuawei isizisela ifowuni ephezulu ene-5,7-intshi yesikrini nge- € 649, iMate S ebhengezwe e-IFA.
I-KinoConsole ihambisa imidlalo yakho yePC kwisixhobo sakho se-Android
Faka iseva kwi-PC yakho kunye neapps kwiselfowuni yakho kwaye uya kuba ukulungele ukonwabela eyona midlalo ilungileyo kwiscreen se-smartphone yakho kunye neKinoConsole.
[APK] I-Instagram 7.5 yenza uphuculo olwahlukeneyo kwimiyalezo ethe ngqo
Ngoku ngqo kuphuculwe ngokupheleleyo kwimiyalezo ethe ngqo evela kwi-Instagram ukuya kwabelana ngemifanekiso ngaphandle kokuphulukana nomtya wencoko
[APK] Uhlelo lokusebenza oluhlaziyiweyo lukaGoogle kunye nelogo entsha, i icon kunye nonxibelelwano oluphuculweyo kancinane
UGoogle uphinde wahlaziya iapp yokukhangela ukuba yeyiphi ilogo entsha kunye nemibala esele ikho kwiGoogle Ngoku.
UGoogle usungula ilogo entsha
UGoogle ukhule kakhulu ukusukela oko yaqalwa. Ngoku inkampani yaseMelika iqala ilogo entsha.
Paypal.me okanye yeyiphi indlela elula yokunika okanye yokufumana imali
I-Paypal.me yinkonzo entsha ye-Paypal yokwenza iphepha lakho lomntu apho unokufumana khona imali kwaye ngaloo ndlela uququzelele ukuhanjiswa kwemali.
Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lwe-Oneplus 2
Namhlanje sikulethela olu hlaziyo lupheleleyo kunye nohlalutyo ngeSpanish ye-Oneplus 2, enye yezona zixhobo zilindelweyo ze-android zonyaka.
[APK] Ujongano olutsha lokuhamba kunye neendaba ezininzi kwiimephu zikaGoogle 9.14
Iimaphu zikaGoogle zisizisela iindaba ezinxulumene nomdibaniso wangaphambili wokuhamba kunye negrafu entsha yokwazi iiyure zoluntu olukhulu
Ukuphonononga i-Iradish X9 Y6, iApple yokuBukela iBluetooth Smartwatch esinokuyifumana ngaphantsi kwama-euro angama-30
Namhlanje sikulethela uphononongo ngeSpanish yeIrishish X9 Y6, inyani yokwenyani yeApple Jonga esinokufumana ngaphantsi kwee-Euro ezingama-30
Ividiyo evuzayo ibonisa iSony Xperia Z5 yeNkulumbuso ngomboniso we-4K kubuqaqawuli bayo bonke
I-Sony Xperia Z5 yeNkulumbuso lulongezo olutsha lomenzi waseJapan ukunika umsebenzisi esona sisombululo siphezulu kwiscreen nge4K
I-Quickpic ethengwe yi-Cheetah Mobile, intlekele
I-Cheetah Mobile ngumphuhlisi owongeza i-adware eninzi kunye nentengiso kwiiapps zayo, ifumene i-QuickPic engcwele.
I-LG Bukela i-Urbane Luxe, i-smartwatch yegolide engama-23-karat ye- $ 1.200
Ushicilelo olukhethekileyo lweLG Watch Urbane lufika noshicilelo lweLuxe lunee-23 carats zegolide kunye nexabiso le-1.200 yeedola kwiiyunithi ezingama-500.
I-Blackberry Venice iya kuba nekhibhodi ye-QWERTY ehambayo
Ifowuni yokuqala yeBlackBerry e-smart phone inokubonisa ikhibhodi ebonakalayo, isilayidi ekhupha iQWRTY.
Le yi-Elephone M2 enenzwa yeminwe
I-Elephone M2 sisiphelo sendlela ephezulu evela kulo mvelisi use China.
I-Instagram ihlaziyiwe kwaye ngoku ikuvumela ukuba ulayishe imifanekiso kunye neevidiyo kwifomathi yomhlaba kunye neefoto
I-Instagram iyasimangalisa sonke ngokukwazi ukulayisha imifanekiso kunye neevidiyo kwifomathi yomhlaba kunye ne-portrair, isitsho phantse kwifomathi yesikwere.
I-Twitter ngoku ikuvumela ukuba usete i-tweet kwiprofayili yakho kwi-Android kunye ne-iOS
I-Twitter isandula ukubhengeza into entsha ukuba iza kuba nakho ukucofa i-tweet kwiprofayile yakho kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS.
UGoogle unika "ujongo" olutsha kujongano lweziphumo zokukhangela zeapps
UGoogle uphucula kakhulu iziphumo zokukhangela usetyenziso olusuka kuGoogle ngoku okanye kwiwijethi yokukhangela.
Thelekisa iDoogee Valencia 2 Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X kunye novavanyo lwesantya
Namhlanje sikuzisa ukuthelekisa kunye novavanyo lwesantya se-Androidsis phakathi kweDoogee Valencia Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X
Imbeko 7, ukuqala kokuvela emva kwengcaciso yayo eLondon
I-Honor 7 sele yenziwe. Kwaye sikulethela imbonakalo yethu yokuqala emva kokuvavanya iflegi entsha ye-Honor. Ngaba uza kuyiphosa?
Ukuphonononga iDoogee Nova Y 100X, iQuad Core Lollipop engaphantsi kwama-80 eeuros
Uhlalutyo kunye noVavanyo olupheleleyo lweDoogee Nova Y 100X, isiphelo esimnandi se-Android esinokuyifumana ngaphantsi kwe-80 Euro.
I-Obi yeFowuni, uphawu lwangaphambili kwe-Apple CEO uJohn Culley uveza ii-smartphones zayo zokuqala ezimbini
I-Obi Worldphone kukubheja kwe-CEO yexesha elide ye-Apple eya kuthi isungule ii-terminals ezimbini kwiimarike ezikhulayo ngexabiso elifikelelekayo kunye noyilo olukhulu.
IMotorola ilibale i-gyroscope kwiMoto X Dlala
IMotorola ilibele i-gyroscope kwiMoto X Dlala kumangaliswa ngabasebenzisi abaninzi ngokuba sisixhobo esixabisa i-400 euros.
UFacebook M yimpendulo kaMark Zuckerberg kuGoogle Ngoku, uSiri, noCortana
I-Facebook ayifuni kulahlekelwa ngumhlaba ngabaphi abancedisi belizwi abanjengoSiri okanye uGoogle ngoku kwaye ityhila uM, oya kuthi waziswe kwi-Messenger
Ezona fowuni zibalaseleyo ze-Android zokudlala
Ukuba unomdla kwimidlalo kwizixhobo eziphathwayo, namhlanje sikulethela ukhetho lwee-smartphones ze-Android ezifanelekileyo zokudlala
I-YouTube yeMidlalo iqala uhambo lwayo namhlanje
Ukudlala iYouTube kukubheja okukhulu kukaGoogle ukuya entloko ukuya entloko ngokuchasene neTwitch, inkonzo ethandwayo yokusasaza kwi-Intanethi kwimidlalo yevidiyo.
IDoogee iveza iDoogee X5 Pro
Siyaqhubeka nokuthetha ngeetheminali ezivela kumazwe ase-Asiya ukuba sithethe ngesiphelo esitsha seDoogee, iDoogee X5 Pro.
Ukucaciswa okutsha kweNexus 5 kucocwe ngendlela eyahlukileyo kuleyo isaziwa ngoku
I-Google Nexus 5 iya kuziswa ngo-Okthobha kwaye iza kuza nohlaziyo olutsha lwe-Android 6.0 Marshmallow.
Ngokukhawuleza iibhetri ezinokuhlala ubomi besixhobo
Itekhnoloji entsha eqinileyo ye-electrolyte inokukhokelela kwiibhetri ezinokuhlala ubomi bonke
Abalingani beCyanogen kunye neWileyFox yokuSungula iiMfono zeMid-Range ezimbini eYurophu, eAfrika naseMbindi Mpuma
Abalingani beCyanogen kunye noWilleyFox oza kuphehlelela ii-smartphones ezimbini eziphakathi kunye nezixhobo ezifanelekileyo kunye nexabiso elifikelelekayo.
Qhagamshela i-Bubble web browser ukuba ikhululeke ngokupheleleyo
Ikhonkco leBubble yenye yeapps eyothuse kakhulu kumaxesha akutshanje ngenxa yokusetyenziswa kweebhabhu ezidadayo zokulayisha ngasemva
Yenza isipili isikrini sakho se-Android kwi-PC yakho okanye kwi-Mac ngeVysor
Ukusuka kwikhompyuter yakho unokubonisa isikrini sakho se-smartphone ngenkonzo entsha eyenziwe nguKoush ebizwa ngokuba yiVysor
Umncedisi welizwi waseCortana u-beta woluntu ufumaneka kuGoogle Play
IMicrosoft iyaqhubeka nokwenza into yayo kwaye ngoku ipapasha i-beta yoluntu yaseCortana eMelika ngenkqubo ye-beta kwiVenkile yokudlala.
I-Samsung Galaxy Note 5 inesiphene kuyilo esinokuyonakalisa ngokusisigxina
Isamsung inengxaki nge-S Pen kwi-Galaxy Note 5 ke kuya kufuneka iyilungise ngandlela thile ngaphambi kokuba ifike eYurophu
I-Samsung Galaxy Note 5 kunye nemicimbi ye-S6 Edge Plus yokwenza izinto ezininzi
Iingxaki ezintsha zokwenza izinto ezininzi kwi-Samsung Galaxy Qaphela i-5 kunye ne-S6 Edge Plus, uburharha obunamandla obuninzi.
Iibhetri ezintsha ngokuzimela ngeveki enye
Iibhetri ezinokuzimela ngeveki sele ziyinyani kwaye zinokuguqula umhlaba wetekhnoloji yeselfowuni
I-ASUS isungula uhlobo olukhethekileyo lweZenfone 2 eBrazil nge256GB yokugcina
I-ASUS iza kuphehlelela eBrazil inguqu ekhethekileyo yeZenfone 2 ene-256 GB yokugcinwa kwangaphakathi okuthatha le smartphone iye kolunye ucelomngeni.
I-LG ibhengeza i-G Pad II 10.1 nge-Snapdragon 800 chip, 2GB ye-RAM kunye nesisombululo se-1920 × 1200
Ubulungisa be-IFA buya kuba ngumsitho apho umenzi waseKorea uLG azakuveza imveliso yawo entsha, ithebhulethi yeG G II II.10.1 ngeSpapdragon 800 chip kunye ne-2GB ye-RAM.
Ngaba uyayithanda i-Android? Apha uneyona ntengiso ingcono yokuqokelela
Njengoko iimveliso ezisemthethweni ze-Android zikwimfuno ephezulu, apha sikubonisa zonke iiwebhusayithi ezisemthethweni ukuzithenga kunye newebhusayithi ezingabizi kakhulu ezingabalulekanga.
Xender, ukuhambisa iifayile akukaze kube lula
Isicelo esitsha seXender sikuvumela ukuba udlulise iifayile ngendlela enobuchule kwaye ikhululekile ukusuka kwi-smartphone yakho iye kwikhompyuter okanye kwenye indawo.
I-OnePlus 2 ifumana uhlaziyo lwe-OTA ukulungisa iStagefright
I-OnePlus 2 ifumana uhlaziyo lwayo lokuqala nge-OTA ukusombulula umngxunya omkhulu kwi-Android, eStagefright.
Iifoto zikaGoogle ziya kukukhumbuza ngeefoto ozithathileyo ngaphambili
Iifoto zikaGoogle, ngemvume yakho oyinikiweyo, iya kubonisa imifanekiso ethile yeziganeko ezahlukeneyo ezenzeke kwixa elidlulileyo kanye njengokuba iFacebook isenza kwinethiwekhi yayo.
Ngaba kulula ukuqikelela ipatheni yokuvula oyisebenzisayo kwi-smartphone yakho ye-Android?
Isifundo esenziwe ngumfundi waseNorway sibonisa ukuqikelela kweendlela zokuvula esizisebenzisayo kwifowuni ye-Android.
Ifowuni yakho elandelayo ye-Android ayinakuba nee -apps zikaGoogle ezininzi ezifakwe kwangaphambili
I-bloatware ifakiwe yodwa kuninzi lweefowuni, ngoku zimbalwa ii -apps zikaGoogle ezizakufika kwisiphelo sakho esitsha se-Android.
IBlackberry Venice, iBlackberry yokuqala ene-Android, inomhla osemthethweni kunye nemifanekiso
Ukubheja i-Blackberry kwi-Android kunye nokwenza i-smartphone ngale nkqubo yokusebenza njengesiqhelo. Ezinye izinto kunye nemihla yokukhutshwa sele isaziwa.
IMicrosoft iphambi kukaGoogle kunye nohlobo lwayo lwe'Google Ngoku kwiThepha 'kuPhando lweBing
Uphendlo lwe-Bing lukaMicrosoft luhlaziyiwe ngomsebenzi omtsha "okhutshelweyo" osuka kuGoogle nge "Ngoku kaGoogle kuThepha" oqala ukhangelo olusekwe kwimeko
I-Samsung Galaxy S6 Edge, la ngamava am emva kwenyanga yokusebenzisa
Sivavanye i-Samsung Galaxy S6 Edge kangangenyanga kwaye ezi zizigqibo zethu
[APK] Khuphela uhlobo olutsha lweLauncher kaGoogle ngoku ngqo kwi-Android 6.0 Marshmallow
Umqalisi kaGoogle ngoku unenguqulo entsha evela kumbono wesithathu wabaphuhlisi be-Android 6.0 Marshmallow.
I-ASUS yokwazisa nge-smartphone kunye ne-smartwatch kwi-IFA 2015
UAsus ubhengeze inkomfa yeendaba ngoSeptemba 2 ozayo kwisakhelo se-IFA eBerlin.
I-HTC O2, ngaba iflegi elandelayo ye-HTC iya kubizwa njalo?
Ngokwendawo evuzayo, iflegi entsha ye-HTC iya kubizwa ngokuba yi-HTC O2 kwaye iya kugcina ialuminiyam emzimbeni wesixhobo.
Le yiBlackBerry Venice, ifowuni yokuqala yeBlackBerry ene-Android
Imifanekiso emitsha yeBlackBerry Venice iyavuza, isixhobo iBlackBerry esebenza ne-Android
I-MIUI 7 iboniswe kwihlabathi liphela nge-beta ROM efumaneka ngo-Agasti 24
UHugo Barra ugunyazisiwe kunye neqela le-MIUI ukuba azise ingxelo yesi-7 yale cape yesiko ithandwayo nenike kakhulu kulo mvelisi.
OnHub, ukubheja njenge-Google router
UGoogle usungula i-OnHub router yayo ezinikele ngokupheleleyo kunxibelelwano olungenazingcingo nangona inezinye izinto ezinomdla.
IBlackphone 2 efumanekayo yoku-odola kwangaphambili, iya kukhutshwa ngo-Septemba
NgeyoMsintsi yinyanga apho kuzakuqaliswa ngokusesikweni iBlackphone 2 entsha, itheminali ekhuthaza ukhuseleko kunye nemfihlo.
I-Fossil ibonisa i-Android Wear smartwatch enikwe amandla yi-Intel chip
I-Apparel brand Fossil isebenzisa inkomfa yonjiniyela ye-Intel ukubonisa i-Android Wear smartwatch yayo yokuqala.
Isamsung iqinisekisa ukuqeshwa kwayo kwi-IFA 2015: nge-3 kaSeptemba
Kwaculwa, sele zingaphantsi i-IFA 2015, iinkampani ezininzi ziqala ukubiza amaphephandaba, njengoko kunjalo ngeSamsung.
Iprojekthi Ara ilibaziseke ngokusesikweni ku-2016
Ngelixa besicinga ukuba kungekudala siza kuba ngaphambi kokumiselwa kwezinye zeetheminali zeProjekthi Ara, kuya kufuneka siyilinde.
Umboniso wonjiniyela we-Android M 3 uyafumaneka kwizixhobo zeNexus
Ezi zixhobo zilandelayo ze-Nexus zinokufikelela kukhuphelo lwe-Android M lophononongo lwesi-3: Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 kunye neNexus Player
I-Hangouts ngoku inayo inkonzo yayo yewebhu
Inkonzo yemiyalezo kaGoogle, iiHangouts, ngoku zinayo iwebhusayithi entsha ukuze zikwazi ukuqhuba kunye / okanye ukulandela incoko kunye nabantu esibathandayo.
I-NUCLUN 2, i-SoC entsha ye-LG inamandla ngakumbi kune-Samsung Exynos 7420
Iimpawu ze-NUCLUN 2 ziye zavuza, i-SoC entsha evela kumenzi we-LG enenjongo yokukhuphisana noluhlu lwe-Samsung's Exynos
I-Android 6.0 Marshmallow isemthethweni
Ifikile, isemthethweni. Inguqulelo entsha ye-Android iya kubizwa ngokuba yiAndrodi 6.0 Marshmallow njengoko uGoogle uqobo ebhengezile.
IGooglePlex ilungiselela umfanekiso omtsha we-Android M
Iiofisi zikaGoogle okanye ezaziwa njengeGooglePlex, zilungiselela ukufumana umfanekiso omtsha we-Android M, oza kutyhilwa kungekudala.
Uphononongo lubonisa ukuba ngo-2015, ama-50% kwiitheminali ezithengisiweyo zinkulu kunee-intshi ezintlanu
Uphononongo lubonisa ukuba kwikota yesi-2 yalo 2015, ama-50% eeterminal ezithengisiweyo zii-intshi ezintlanu okanye ezinkulu.
UXiaomi waphula iirekhodi kwakhona ngeeyunithi ezingama-800.000 zeRedmi Qaphela 2 ezithengiswe kwiiyure ezili-12
UXiaomi ukwenzile kwakhona ngeeyunithi ezingama-800.000 ezithengisiweyo zeXiaomi Redmi Qaphela 2 kwiiyure nje ezili-12. Ingxelo entsha yomenzi waseTshayina.
Umfanekiso wokuqala weGoogle Nexus 5 entsha ihluziwe
Umfanekiso wokuqala wento eya kuba yiGoogle Nexus 5 entsha kulo nyaka ukhutshiwe. Ifowuni ekudala ilindelwe ngabasebenzisi abaninzi.
I-ZUK iveza umfanekiso wayo ocacileyo wesikrini kwii-smartphones
I-ZUK ityhile isikrini sayo esibonakalayo. Isikrini esinokubona ngaphezulu kweminyaka kuyo nayiphi na i-smartphone.
Entsha i-Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ngaba ubungakanani bubalulekile?
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo i-Samsung Galaxy S6 Edge Plus entsha ibonisiwe, phantse iwele le-Edge kodwa ngobukhulu obukhulu.
U-Evernote uqala ukukhutshwa kwe-Evernote Web interface entsha
U-Evernote uphantse wahlaziya ngokupheleleyo ujongano lwewebhu lwenkonzo yakhe eyaziwayo yokuthatha amanqaku ukuqala kwiveki ezayo.
Ukusasazwa ngokuBukhoma ku-YouTube kubhengeziwe kwaye kulungele ukukhuphisana nePeriscope neMeerkat
UGoogle ufuna ukungena kudidi lokusasaza ngqo ukukhuphisana ngokuchasene neapps ezimbini ezizithathela ezazo: iPeriscope neMeerkat.
I-Yahoo Livetext ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu
I-Yahoo's Livetext imele ukuba sisixhobo esibonelela ngesakhono sokunxibelelana ngokubhaliweyo kunye nevidiyo imiyalezo kodwa ngaphandle komsindo.
I-Samsung Galaxy Note 5 ayizukuhanjiswa eYurophu
Nangona kubonakala ngathi ziindaba ezimangalisayo, i-Samsung Galaxy Note 5 ayizukuhanjiswa e-Europe ukubheja kuphela kwi-Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
UGoogle usungula uvavanyo lwe-Android ukubonisa ezona zixhobo zinqabileyo ze-Android kunye ne-Android Wear
Ukusuka kuvavanyo lwe-Android ungasondela kwezonaapps zivulekileyo zinemithombo yolwazi apho unokuthatha ikhowudi eyeyakho.
Ngoku ungathenga i-OnePlus 2 ngaphandle kwezimemo
Ngaba uyafuna ukuthenga i-OnePlus 2 ngaphandle kwezimemo?
Ususe umda weempawu ezili-140 zemiyalezo ethe ngqo evela kwi-Twitter
I-Twitter ngoku ivula iminyango kuye nawuphi na umsebenzisi ukuba athumele imiyalezo ethe ngqo ngomda ongaphezulu koonobumba abali-140.
IAmazon ibuyela kumlo kunye nenye ipakethe yeeapps zasimahla kunye nemidlalo enexabiso le- € 90
IAmazon izisa enye ipakethi yee -apps kunye nemidlalo yevidiyo exabisa i-90 euros apho sinokufumana khona iBoak Simulator enkulu njengenye yezona zinto zifunyenwe.
I-Huawei Mate 7s iya kuziswa ngexesha le-IFA 2015
IHuawei ineenoveli ezininzi ezicwangciselwe i-IFA 2015 eBerlin. Enye yazo sisiphelo sendlela esilandelayo, iiHuawei Mate 7s eziza kuboniswa kumgangatho olungileyo.
I-LeTV ithengisa ii-smartphones ezisisigidi esinye kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezintathu
Inkampani yeLeTV ithengise i-1 yezigidi ze-smartphones kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezi-3, idlula nayiphi na uphawu ukuza kuthi ga ngoku.
I-Elephone M2, eyona terminal iphambili ye-Elephone
Uphawu olusekwe eHong Kong lusothusa kwakhona ngokunikezela ngesiphelo salo esitsha. Yeyona Elephone M2, eyona terminal iphambili ye-Elephone.
I-Facebook ilungiselela ukumiliselwa kwenkqubo entsha yezaziso zeendaba
I-Facebook iphuhlisa usetyenziso olunamandla amakhulu kodwa ilula kakhulu ukuqhubeka neendaba ezishushu.
IMicrosoft OneNote ihlaziywa nge- "bar floating" ukwenza amanqaku akhawulezileyo ngelixa usebenzisa enye iapp
I-OneNote ihlaziywa ngokudibanisa ukuba ithetha ibha edadayo apho uza kwenza inqaku elikhawulezayo ngelixa usebenzisa enye iapp.
I-LastPass iba simahla kodwa kuya kufuneka uhlawule ngokutshintsha ukusuka kwifowuni ukuya kwi-tablet okanye kwi-PC
I-LastPass isimahla, nangona ufuna ukuphuma kwifowuni uye kwithebhulethi / kwiPC kuya kufuneka uhlawule.
I-OnePlus 2 isengxakini kwakhona: ukulibaziseka kokuhambisa
Inkampani ye-OnePlus 2 isuka kwenye ingxaki iye kwenye, ngoku izikhalazo zimalunga nokulibaziseka ekuhanjisweni kwesiphelo e-US Uxolo luluntu.
Le inokuba yeyokuqala kwiHuawei smartphone enesikrini esigobile
IHuawei ingabonisa kwiinyanga ezizayo ukuba yeyiphi eyakuba yi-smartphone yokuqala enescreen esigobile kwimbali yayo.
I-Nextbit, i-smartphone yeprimiyamu evela kubasebenzi bakudala bakaGoogle, Apple kunye neHTC
I-Nextbit yinkampani enabasebenzi bangaphambili bakaGoogle, iApple, iAmazon kunye neHTC abaza kuzisa i-smartphone yabo yokuqala ngoSeptemba 1.
I-Pushbullet ngoku ibonelela ngenkxaso yokuphelisa ukuphela kokugcina kwizaziso, Ikopi yendalo yonke kunye nokuncamathisela kunye neSMS
I-Pushbullet ngoku ibonelela ngenkxaso yokuphela kokugqibela yokubethela mirroring, i-SMS, kunye ne-Universal Copy kunye nokuncamathisela izaziso. Inguqulelo entsha ijolise kukhuseleko.
Silindelwe yintoni ngokuDlala kuYouTube
Amatye amabini anzima aza kujongana ukusukela ngoku ukusasaza ngqo kunye nokudlala. Le yimidlalo ye-YouTube kunye neTwitch.
IVulkan, isindululo sikaGoogle sokuphucula imifanekiso kunye nemidlalo yevidiyo kwi-Android
NgeVulkan kulindeleke ukuba ibe nakho ukubonelela ngeziqendu ezintsonkothileyo kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kweCPU ukuze ufumane ukusebenza okungcono kwizakhelo.
UGoogle uhlengahlengiso olupheleleyo kwiAlfabhethi kwaye onyule iSundar Photosi CEO
Ngoku uGoogle uyinxalenye yequmrhu elikhulu elaziwa njengeAlfabhethi kwaye eya kuthi ibe nazo zonke iiprojekthi eziguqulwe zaba ziinkampani.
Iitayi ezininzi zeHonor 7i ziyavuza
Sele silazi igama le-Enigmatic Honor yefowuni ngekhamera eshibilikayo: Hlonipha i-7i
Ifowuni ye-Samsung enigmatic ifikelela kumanqaku angama-95.972 kwi-AnTuTu. I-Samsung Galaxy S7 kunye ne-Snapdragon 820?
Ifowuni ye-Samsung engummangaliso ifumana amanqaku anomdla kwi-AnTuTu. Ngaba iya kuba yi-Samsung Galaxy S7?
Imifanekiso emitsha evuzayo ye-Samsung Galaxy Note 5 kunye neGalaxy Edge +
Uthotho lwemifanekiso emitsha ikhutshiwe ibonisa uyilo lwe-Samsung Galaxy Qaphela i-5 kunye ne-Galaxy Edge +
[APK] Ngoku ziyafumaneka ii-Hangouts 4.0 ngokuhlaziywa kwayo ngokupheleleyo kuyilo lweMathiriyeli nokunye okuninzi
I-Hangouts 4.0 noYilo lweZinto kunye neendaba ezininzi ezinomdla ziyafumaneka. Khuphela i-APK ukuze uzame ngokukhawuleza.
UJoaquim Vergès ujoyine iqela le-Twitter ukuphucula usetyenziso lwe-Android
I-Twitter iya kuba phakathi kwezikhundla zayo yenye yezona nkqubo zibalaseleyo zabaphuhlisi besithathu kwinethiwekhi yoluntu edumileyo.
Ukuvuza kwangaphakathi kubonisa uvavanyo lokusebenza kwe-Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 kunye ne-Android M phantsi kwengalo
Ukuvuza uxwebhu lwangaphakathi lwe-Samsung kubonisa ukuba i-Samsung Galaxy S7 ivavanywa nge-Snapdragon 820 SoC
Ngaba iselfowuni ixhonyiwe xa uvula ifoto kuWhatsApp? Sifundisa indlela yokusombulula
Sifundisa indlela yokusombulula enye yezona ngxaki zidumileyo zeWhatsApp. Ngala maqhinga uya kuthintela iselfowuni ekubeni ixhomeke xa uvula ifoto kwi-app.
IHuawei ine-smartphone elungiselelwe i-IFA engeyiyo iMate 8
Wonke umntu ulindele ukuba uHuawei azise iMate 8 entsha ngexesha le-IFA elandelayo, kodwa nangona kunjalo, umenzi waseTshayina uza kuzisa esinye isixhobo kwibala.
I-Android isebenza kwiPasipoti entsha yeBlackberry
Kukho amarhe amaninzi okuba inkampani yeBlackberry inokumilisela eyayo isixhobo se-Android.
Ithebhulethi yeNokia N1 ekugqibeleni ifika eYurophu
Sinokuyithenga iNokia N1 eYurophu. Ithebhulethi entsha yakwaNokia iza ngexabiso lama-314 euros kunye nee-euro ezingama-20 zeendleko zokuhambisa
I-Meizu MX5 Pro ingadibanisa iprosesa ye-Exynos 7420
Ekupheleni kukaJuni sikubonisa iMeizu MX5, iflegi entsha yomenzi waseAsia. Kude kube kubonisiwe iMeizu MX5 Pro. Kwaye kukuba kancinci kancinci iimfihlo ezintsha zetitan elandelayo Meizu zityhilwe. Okokugqibela? Ukuba iMeizu MX5 Pro inokufaka iprosesa ye-Exynos 7420.
Isiphawuli sokudilizwa sele sicwangcisela i-HTC
I-HTC sele inesicwangciso sokubeka endaweni sokunciphisa abasebenzi kunye nokugcina inkampani ngekamva eliqinisekileyo elingathembisiyo.
Ivenkile eseMbindi Mpuma icoca zonke iinkcukacha zeGalaxy Note 5 kunye ne-S6 Edge +
IJarir, ivenkile ekwi-intanethi ethengisa kuMbindi Mpuma, ipapashe uthotho lweentengiso ezibonisa ...
Ngaba i-HD kunye ne-3D smartphone? Sikunikezela nge-VKWorld Discovery S1
Isiphelo sendlela enomdla kwiVKWorld Discovery S1. Isiphelo sendlela esinenkcazo ephezulu yesikrini, i-3D kwaye ngaphandle kweglasi.
UDoogee ubhengeza iDoogee Y100 Plus
UDoogee ubhengeze iselfowuni entsha, yi-Doogee Y100 Plus. Isiphelo esiphuculisa isixhobo se-Y100 kuba iya kuba nescreen kunye nebhetri
I-Wii M okanye inokuba yintoni iselfowuni yeNintendo ene-Android
Abalandeli bakaNintendo baphupha lenkampani ngenye imini isungula i-Android smartphone. Namhlanje sikubonisa i-Wii M, umbono wokuba ungahamba njani.
I-Apple fanboys ekhohlisiweyo yenza i-hallucinate nge-Android ikholelwa ukuba yinguqulelo entsha ye-iOS 9
Njengoko kubonisiwe kule vidiyo, ii-Apple fanboys ziya kumangaliswa ngamathuba anikezelwa yi-Android Lollipop ekonakaleni i-iOS ayithandayo.
I-YouTube Maps Explorer, okanye indlela yokufumana iividiyo ezilayishwe naphina emhlabeni
I-YouTube Maps Explorer sisicelo sewebhu esisinceda ukuba sazi iividiyo ezilayishwe kuYouTube kuyo nayiphi na imephu.
UXiaomi ulungiselela iprosesa yakhe eza kuthi ifike kwi2016
UXiaomi uza kuzisa iiprosesa zayo ukuqala kunyaka olandelayo. Iiterminal zokuqala eziya kuphathwa zii-SoCs ezintsha ziya kuba zezoluhlu lweRedmi.
Ngaba ufuna ukuthenga i-Samsung Galaxy S6 Edge? ngoku ixabisa i-euro ezingama-699
Ukuba ufuna ukuthenga i-s6 Edge enexabiso eliphantsi, ngoku lixesha lakho: I-Samsung ilinciphisile ixabiso le-Galaxy S6 Edge nge-150 euros, ngoku ibiza i-699 euros
I-ZTE Blade V6 iboniswe ngokusesikweni
Umvelisi wase-China u-ZTE uveze indawo yakhe elandelayo eza kuthi isungulwe eSpain njengehlabathi lokuqala, yi-ZTE Blade V6.
I-Honor 6 Plus, i-phablet ephezulu yokuphela engaphantsi kwama-400 euros
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo olupheleleyo lwe-Honor 6 Plus, i-phablet entsha ene-Honor enenjongo yokuqhekeza intengiso ngexabiso layo: € 399
I-Xperia C5 Ultra kunye ne-Xperia M5 entsha ihluziwe ngaphambi kokuba iboniswe
Iiterminal ezimbini ezintsha zakwa-Sony, i-Xperia C5 Ultra kunye ne-Xperia M5, sele zivuliwe iiyure ngaphambi kokuba zingeniswe
I-WhatsApp iya kubandakanya i-emoticon ye-pales yaseValencian
Kungekudala i-WhatsApp izakubandakanya ii-emojis ezintsha ezili-15, kubandakanya enye emele ipalent yaseValencian yentsomi. Iya kufakwa enkosi kwizicelo zomsebenzisi.
Umguquli kaGoogle uhlaziyiwe sele eneelwimi ezingama-26 ezikhoyo zoguqulo ngaxeshanye
Itoliki kaGoogle ihlaziywa ngeelwimi ezininzi. Sele zikho iilwimi ezingama-26 ezikhoyo kule nkonzo kwiMountain View.
I-OnePlus 2, "umbulali obalaseleyo" omtsha utyhilekile
I-OnePlus 2 sele ihanjisiwe kunye nazo zonke izinto zayo ezintsha kwaye kweli nqaku siza kuhlalutya nganye nganye.
#Paellaemoji okanye indlela iPalencian Paella engena ngayo kuWhatsApp
Kuluhlu lweemvakalelo ezintsha zokubandakanya, leyo yePalencian Paella kwiWhatsApp isandula ukudityaniswa.
UGoogle uphucula ukhetho lwe-beta olunikezelwa kubaphuhlisi kwiVenkile yokudlala
UGoogle ubonelela ngeendlela ezininzi kubaphuhlisi ukuze abasebenzisi bavavanye ii-betas zeapps zabo kwiVenkile yokudlala.
Khuphela uze ufake i-Sony's 'Concept for Android' kwi-Xperia Z3
Ukusuka kwi-XDA le ROM ikhutshiwe ephethe i-Sony entsha kwiiterminal zayo kunye 'ne-Concept ye-Android' kwaye yona ngokwayo iyi-Android emsulwa.
I-LG G Flex 3 iya kuziswa ngo-Matshi kwaye iza kufika nge-Snapdragon 820
Zonke iinkcukacha zobuchwephesha be-LG G Flex 3 sele zivuziwe, i-LG's curved terminal entsha eya kuthi ivezwe ngo-Matshi
Thelekisa phakathi kweMoto G3 VS Doogee Valencia 2 kunye ne-100 Pro
Sijongene neMoto G3 VS Doogee Valencia 2 kunye ne-100 Pro yolawulo lwe-Android ekumgangatho ophakathi. Ngubani oza kuphumelela edabini?
Ukuthengiswa kwethebhulethi kuqala ukwehla, ukuphela kwebhola?
Ukuthengiswa kwethebhulethi kuyehla ngenxa yobungakanani obonyukayo bezikrini ze-smartphone
Isiphene esitsha esiyingozi sokhuseleko sinokwenza ukuba ifowuni yakho ingabinamsebenzi de uyiqale kwakhona
Kufunyenwe ubungozi obutsha kwi-Android eyenziwe yasebenza ngeevidiyo eziphazamisayo kwifomathi ye-MKV kwaye ichaphazela isiqingatha sezixhobo
Uphengululo lweMoto G 2015: Ukuphoxeka okukhulu kulo nyaka
Kolu hlaziyo lweMoto G 2015 sikufundisa phambi kwayo nayiphi na into yonke le nto isiphelo esitsha seMotorola esisinika yona.
Ezi zinikezelo zibonisa ukuba uyilo lwe-Samsung Galaxy Note 5 luza kujongeka kanjani
Kushiyeke okuncinci ku-Agasti 13 olandelayo, umhla ekulindeleke ukuba i-Samsung ibonise ngayo i-Samsung Galaxy Note 5. Ngokuthe ngcembe ezinye zeemfihlo zelungu elitsha losapho lweNqaku zityhilwe kwaye ngoku sikulethela imifanekiso emitsha .
I-Hangouts 4.0 ilibazisekile kodwa ngesizathu esihle
Abasebenzisi be-Android Wear baya kuxhamla kakhulu kwii-Hangouts 4.0 njengoko sifundile namhlanje.
Imbali ye-WhatsApp: imvelaphi, indaleko kunye nempumelelo
Sixelela ibali lesicelo semiyalezo emiselweyo, i-WhatsApp. Ukusuka ekuqalekeni kwayo ngaphambi kwe-Android ukuya kwintengiso yayo kuFacebook nakuphuculo lwexesha elizayo.
I-Yahoo isungula i-Livetext, usetyenziso olutsha lwemiyalezo edibanisa ividiyo ngaphandle komsindo kunye nemiyalezo ebhaliweyo
Nge-Yahoo Livetext uyakuthetha nabahlobo bakho okanye usapho ngombhalo kunye nevidiyo, kodwa oku ngaphandle kwesandi ukuze incoko ibe yenye into.
Isamsung iyakwehlisa ixabiso le-S6 kunye ne-S6
Ngaphandle kwamanani amnandi kwintengiso, i-Samsung iya kulithoba ixabiso le-S6 kunye ne-S6. Amanani ambalwa kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi koMsitho ongapakishwanga.
Ukucoca emva kweNexus 5 eNtsha
Sele siqalisile ngamarhe kunye nokuvuza, kule meko umva otyholwayo weNexus 5 ukhutshiwe yi-OnLeaks.
I-Wipower yeQualcomm izisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwiifowuni kunye neetafile ezinemizimba yentsimbi
Enye yeengxaki zee-smartphones ezidibanisa umzimba wentsimbi kukuba azinakho ukusebenzisa itshaja engenazingcingo: iinxalenye zazo zentsimbi ziya kuba shushu ngokugqithisileyo, yiyo loo nto kude kube ngoku bekungenakwenzeka ukusebenzisa le nkqubo. Ngethamsanqa iQualcomm ifikile kunye neWiPower yayo.
U-Sony angabonisa i-Xperia Z5 + ngo-Matshi
Amarhe amatsha acebisa ukuba u-Sony angabonisa i-Xperia Z5 + ngo-Matshi. Isiphelo esiza kuvela ngaphandle kweempawu zayo ezinamandla.
Isifundo- Ungasikhulula njani indawo kwi-Android ukuze isebenze ngcono
Sichaza ezona ndlela zokukhulula isithuba kwi-Android. Iya kuphucula ukusebenza kunye namandla e-smartphone yakho, kwaye zonke ngendlela elula.
Thelekisa iMoto X Dlala iVs Samsung Galaxy S6
Thelekisa apho sibeka khona iMoto X Dlala kunye ne-Samsung Galaxy S6 ubuso ngobuso, yeyiphi eya kuba yeyona ilungileyo?
Cube I7 Remix OS: Oku kukubonakala kwam emva kweeveki ezimbini zokusebenzisa kakhulu iThebhulethi
Emva kokuvavanya ngokucokisekileyo iThebhulethi Cube I7 Remix OS ezi zezona mpawu zam zinyanisekileyo.
Thelekisa phakathi kweMoto G 2014 kunye neMoto G 2015
Thelekisa apho sibeka khona iMoto G 2015 kunye neMoto G 2014 ubuso ngobuso, apho kukho ophumeleleyo ocacileyo kwaye inokuba yenye yezona zinto zibalaseleyo zokubheja.
I-DxOMark ibeka i-Moto X Style njenge-smartphone yesithathu ngeyona khamera intle
Kwi-benchmarking ye-DxOMark, isimbo se-Moto X sibekwe njengeyona fowuni yesithathu ilungileyo kwikhamera. I-feat feat.
Ukuphononongwa kweDoogee Valencia 2 kunye ne-100 Pro.Isixhobo esifihlakeleyo sikaDoogee se-Android esezantsi
Namhlanje sikulethela uhlalutyo kunye nevidiyo ngokutsha kweDoogee Valencia 2 Y 100 Pro, isiphelo sendlela esiza kulawula kwinqanaba eliphakathi le-Android.
Ungasifumana njani isimemo sokuthenga i-OnePlus 2
Sikubonisa ukuba usifumana njani isimemo sokuthenga i-OnePlus 2 ngo-Agasti 11 xa isungulwa.
I-YouTube ayizukucela umsebenzisi kwiprofayile kaGoogle + ukuba ayilayishe, aphawule okanye enze ijelo
Utshintsho lokuqala iya kuba lupapasho lwezimvo kwiYouTube ngaphandle kokuvela kuGoogle +. Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo awuyi kufuna kwaGoogle +.
Isamsung yazisa isiganeko esingafakwanga ngo-Agasti 13 ngentetho yeGlass Qaphela 5 kunye ne-S6 Edge Plus
Kumsitho ongafakwanga we-Samsung ngo-Agasti 13, i-Samsung Galaxy Note 5 kunye ne-Galaxy S6 Edge kunye nazo kulindeleke ukuba zityhilwe.
Le iya kuba yi-S-Pen ye-Samsung Galaxy inqaku 5
Sikwazile ukubona ukuba i-S-Pen ye-Samsung Galaxy Note 5 iyakuba yintoni, into ebalulekileyo kwiifable zomenzi waseMzantsi Korea kwaye eya kuthi ibonakale kwimathiriyeli eyakhiwe kuyo.
Ukuphononongwa ngeSpanish kwi-Yi Action Camera evela kwiXiaomi, iGoPro Hero 3 engaphantsi kwe-100 yeeYuro
Namhlanje sikulethela uphononongo kunye nohlalutyo lwe-Xiaomi Yi Action Camera, ikhamera yesenzo okanye ikhamera yezemidlalo eneenkcukacha zobuchwephesha ezifana neGoPro Hero 3 esinokuyifumana ngaphantsi kwee-Euro ezingama-100.
I-Instagram ivavanya umhleli weefoto omtsha ukwenza ukuba kube lula ukwabelana ngayo
Umkhethi womfanekiso omtsha luvavanyo olutsha lwe-Instagram ukwenza ukuba kube lula ukwabelana ngemifanekiso ngokusebenzisa inethiwekhi yoluntu.
Indawo yokuhlala ikhutshwa iya kukhutshwa kwi-Android ngo-Agasti 13
Nge-13 ka-Agasti ngumhla okhethwe yi-Bethesda Studios ngokwawo ukumiliselwa kweShelter yokuwa kwi-Android kunye nomlinganiswa omtsha kunye neentshaba.
Cube I7 CX RemixOS kwakhona ithebhulethi. Ithebhulethi ye-Android kunye nebhodi yezitshixo ebiza imali engaphantsi kwama-200 eeuros
Namhlanje sibonisa uphononongo kunye nohlalutyo lwethebhulethi yeCube I7 CX RemixOs ene-Android 4.4.4 Kit Kat kunye ne-Cube CDK01 ikhibhodi yemagnethi, iseti ebalaseleyo engaphantsi kwe-200 Euro.
Uhlalutyo lwe-Ulefone Yiba yiTouch 2, yonke i-Octa Core kunye ne-3Gb ye-RAM engaphantsi kwe-170 Euro
Namhlanje sikuzisela uphononongo kunye nohlalutyo olupheleleyo lwe-Ulefone Be Touch 2, isiphelo sendlela ye-Android eneziphelo eziphezulu ngexabiso eliphantsi le-Android.
Uhlalutyo lomda we-Samsung Galaxy S6, i-smartphone yotshintsho kumenzi waseKorea
Senza uhlalutyo lomda we-Samsung Galaxy S6, eyona smartphone inamandla kwaye oko kuthetha ukuba utshintsho kutshintsho lwangaphambili lothotho lwayo lwe-S.
IHonda ibhengeza imoto yayo yokuqala ngeAuto Auto
Ngo-2016 i-Honda Accord yimoto yokuqala esuka kulo automaker ukubonisa i-Android Auto ukuzisa amava apheleleyo e-Android endleleni.
I-YouTube yenziwa ngokutsha ngokutsha ngakumbi abenzi bemxholo okanye ii-youtubers
I-YouTube ifumana ingxelo entsha egxininisa iithebhu ezintathu kunye nokufika kwezixhobo ezininzi zokuhlela iividiyo.
Imifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy Note 5 icociwe
Sele sinemifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy Note 5 kunye ne-Galaxy S6 edge + entsha, enokuqinisekisa ukufika kwabo ngo-Agasti 13.
Ulwandiso olulandelayo lwe-Hearthstone 'Ukhuphiswano oluKhulu' lufika ngo-Agasti
IBlizzard sele ilungiselele ulwandiso olutsha 'iTonamenti eNkulu' ye-Hearthstone eyokumiliselwa ngo-Agasti
I-Sony Concept ye-Android: i-Android emsulwa kunye nosetyenziso lwe-Sony kunye neempawu
I-Android emsulwa ikulindile ngekona ngeXperia Z3 entsha 'Concept ye-Android' evela kwaSony.
UGoogle udlulisa iqhosha le-FAB kwaye alitshintshe kwi-bar emfutshane kwi-Google Keep
Kwi-app yokugcina inqaku, iGoogle ithathe indawo yeqhosha le-FAB, elize ne-Android Lollipop, kunye ne-bar yesenzo ekhawulezayo.
U-Yoigo uza kulisusa inani leSinFín ngoSeptemba
I-Yoigo ingashenxisa ireyithi edumileyo yeSinFín kwikhathalogu yayo kuyo yonke inyanga kaSeptemba ngenxa yenzuzo yayo embi
I-Doogee F3: iinkcukacha kunye neempawu
Ngaba uyafuna ukufumana iDoogee F3 entsha? Namhlanje sikuzisa zonke iinkcukacha, ukubakho kunye nexabiso lokwazisa ngale Doogee smartphone entsha
Uhlaziyo lwe-Android 5.1.1 Lollipop lufika kwi-Sony Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 kunye ne-Z2 Tablet
I-Android 5.1.1 ilapha ngezixhobo ezahlukeneyo kuluhlu lweXperia Z: Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 kunye neZ2 yeCwecwe
[APK] Ngoku ungabona iividiyo ngokuthe nkqo kwiYouTube
Ekugqibeleni singadlala ezo vidiyo zimileyo nkqo ngokufanelekileyo ngenxa yenguqulo entsha yeYouTube kwi-Android.
[APK] Iimephu zikaGoogle 9.2 zongeza ubalo maxesha lweendawo otyelele kuzo
UGoogle udibanise ubalo-maxesha lwembali yeendawo kwiimephu zikaGoogle njengeyona nto intsha kwinyanga ezidlulileyo zenkonzo yayo yemephu.
Ukuthengiswa kwehlobo kwe-SNK ngeeklasikhi ezili-11 kwi- € 0,99 nganye
I-SNK inemidlalo emikhulu yeklasikhi kwiVenkile yokudlala kwaye iyenza ifumaneke kwintengiso yehlobo ngexabiso le- € 0,99
I-Adobe Lightroom ihlaziywa kuhlobo lwe-2.1 kunye nokuseta ikopi, ujongano oluphuculweyo kunye nokunye
Ngaphandle kwezinto ezintathu ezothusayo, inguqulelo ye-2.1 yeAdobe Lightroom iza nokulungiswa kwe-bug ezininzi.
Iifoto zikaGoogle + zivalwa ngo-Agasti 1, ixesha lokutshintshela kwiifoto zikaGoogle
Iifoto zikaGoogle + zivalwa nge-1 ka-Agasti ukwenza indlela yeefoto zikaGoogle, usetyenziso lukaGoogle oluzimeleyo oluya kujonga yonke imifanekiso yakho.
Inguqulelo entsha yeTelegram idibanisa i-YouTube yangaphakathi, iVimeo kunye nabadlali beSoundCloud kwingxoxo
I-Telegram ibandakanya i-YouTube yangaphakathi, iVimeo kunye ne-Soundcloud abadlali kwingxoxo njengeyona nto intsha kwi-version entsha.
Into esinayo kwi-Android kunye nomncedisi welizwi uCortana
UCortana nguye Windows 10 umncedisi welizwi oza kwi-Android kwi-beta kwaye unokukhetha okuninzi kunokuba bekulindelwe.
Isamsung yazisa ngeGlobal Tab S2 8.0 kunye neGPS Tab S2 9.7
Umvelisi waseKorea uSamsung sele enamacwecwe amabini amatsha alungele inyanga ezayo neGalaxy Tab S2 8.0 kunye neGalaxy Tab S2 9.7.
Ukusonga ii-imeyile ngendlela elula yinto entsha nge-Inbox
I-inbox ngoku ivumela ukuhlehlisa ii-imeyile ngendlela elula nelula ekhawulezisa izinto ngandlela zonke. Iinkcukacha ezincinci zokubaluleka.
I-Plex ihlaziywe kwi-4.6 ngobuninzi boYilo lwezixhobo kunye nezinye izinto ezintsha
I-Plex yenye yezona ndlela zibalaseleyo zokudlala umxholo wemultimedia kwiscreen se-smartphone yakho okanye kwi-Smart TV yakho.
Ezi zezona zinikezelo zinomdla kakhulu kunyuselo lweMedia Markt Mobile Mania
Namhlanje sikubonisa ezinye zezona zibonelelo zibalaseleyo ezivela kwiMobile Mania evela kwiMedia Markt, inkuthazo ephela ngoJulayi 22, 2015.
Umnyhadala wokusasaza weMotorola kaJulayi 28, 2015. Ufuna ukusibonisa ntoni?
Namhlanje sifumene isiqinisekiso esisemthethweni somsitho omtsha wokusasaza we-Motorola ngoJulayi 28, 2015 ngo-15: XNUMX emva kwemini.
URovio ubhengeza iiAngry Birds 2 ngoJulayi 30
Nge-30 kaJulayi ngumhla okhethwe nguRovio wokumilisela iAngry Birds 2 kwi-Android. Iintaka zasendle kwakhona kwi-smartphone yakho.
IPushbullet ye-Android ifumana inkxaso epheleleyo yemiyalezo yeSMS
I-Pushbullet sele ihlanganise inkxaso epheleleyo yemiyalezo ye-SMS kuzo zombini i-Android kunye nohlobo lwe desktop.
Umbuzo wamaqhosha: entsha evela kuGoogle kwiintengiso zakho kunye entsha kwi-Facebook yamaphepha akho
UGoogle uya kubandakanya iqhosha lokuthenga kwiziphumo zokukhangela kunye neFacebook iya kubandakanya enye kumaphepha enethiwekhi yakhe edumileyo.
Iiflethi zicoca iinkcukacha zeHuawei Nexus: 5,7, QuadHD screen, Snapdragon 820 chip and body metal
IHuawei ivelisa iNexus entsha eza kufika kwikota yokugqibela yonyaka ngescreen se-intshi ye-5,7 ngesisombululo seQuadHD.
Usuku lokuqala lweAmazon, namhlanje lusuku lokuthenga lwehlabathi kunye nezibonelelo ezimnandi
Namhlanje uJulayi 15 lusuku lwePremiyamu yeAmazon, usuku olugqibeleleyo lokufikelela kumaxabiso aphambeneyo apho sifumana inqanaba lokuqala leemveliso ze-Android.
I-Twitter kunye notshintsho lwengqondo kubaphuhlisi bomntu wesithathu
I-Twitter ibe nexesha elinzima kunye nabaphuhlisi benkampani yesithathu benza abathengi be-Twitter. Ngoku ufuna ukuba basondele kwakhona.
I-Skype 5.5 izisa ukungena ngokulula kunye nokujonga kwangaphambili kwengxoxo
Inguqulelo entsha 5.5 yeSkype izisa nendlela elula yokungena kunye nokuba ingaba yintoni amakhonkco angaphambili kwincoko.
IMozilla ibhloka zonke iinguqulelo zeFlash kwiFirefox
Iqela lokuqhekeza lisebenzise iFlash Player ukuba sesichengeni sokungena kwiikhompyuter zabasebenzisi. IMozilla ibhloka iflash kwiFirefoz de ibe yinguqulelo entsha.
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo lweLenovo K3 Qaphela, yonke i-64-bit Octa Core, 2 Gb ye-RAM kunye nescreen se-IPS FullHD esinokuyithenga ngee-135 Euro kuphela.
AbakwaNokia bafuna umvelisi wodumo nodumo lwehlabathi lonke ngokubuya kwayo
AbakwaNokia bafuna umenzi wokubuyela kwayo ukuze baphathe imveliso, inkxaso, ukuthengisa kunye nokusasaza amajelo okubuyela kwayo.
INokia APHA Iimaphu beta yoluntu ekhutshwe kwi-Android
INokia APHA iimephu sele ine-beta yayo esidlangalaleni apho nawuphi na umsebenzisi we-Android anokufikelela kuyo ukufumana iindaba zabo zamva nje.
Ukucaciswa okungakumbi kweGlass Qaphela 5 kucociwe: 4GB ye-RAM, 5 MP ye-OIS yekhamera yangaphambili ...
I-Galaxy Note 5 iya kuziswa phakathi ku-Agasti ngokwamahemuhemu amva nje. Ifowuni eza kuza nenkqubo yeSoC "konke-in-nye".
Ukuhlaziywa kuhlaziywa ngesidlali sefestile esidadayo esifana neYouTube
Qalisa iwindow edadayo kunye nokudlala kwesitishi kuTwitch ngohlaziyo olutsha ngelixa usenza enye into kwifowuni yakho.
Ngoku ungathumela iidilesi zikaGoogle ezisuka kwikhompyuter yakho ziye kwisixhobo sakho se-Android
Ngoku ungathumela idilesi ekhangelwe kuhlobo lweGoogle Maps kwidesktop yakho
Uyenza njani into yokuqaphela ubuso kwiifoto zikaGoogle
Sikubonisa indlela yokwenza esi sixhobo kwiifoto zikaGoogle ezivela ngaphandle kweUnited States ukuze iifoto zakho zilungelelanise kwaye zizitakishe.
I-LG G4s, umzalwana omtsha wosapho lwe-LG's G4
Abakwa-LG bazise ii-LG G4s, umntu oza kungena ezihlangwini ze-LG G3s kunye nomninawa omncinci kwiflegi yenkampani, i-LG G4. Sinikela iimpawu zayo eziphambili.
Inkcazo esemthethweni ye-Samsung Galaxy Note 5 iqhubele phambili phakathi ku-Agasti
Ngokucacileyo intetho esemthethweni ye-Samsung Galaxy Note 5 kulo nyaka izakube sele iqinisekisiwe phakathi ku-Agasti 2015.
I-Facebook yongeza iindlela ezintsha zokulawula oko kubonwayo kwi-feed yakho yeendaba
I-Facebook izakwazisa ngeendlela ezintsha zokulawula ukondla iindaba kwiiveki ezizayo.
Yintoni entsha ku-Android M yokuPhononongwa kwangaphambili 2
Umboniso wonjiniyela we-Android M 2 usungulwe nguGoogle olayishwe izinto ezininzi ezintsha esikuxelela zona ngokweenkcukacha.
UGoogle utsala iadaptha ye-Ethernet ukusebenzisa iChromecast ngaphandle kweWiFi
UGoogle usandula ukukhupha iadaptha esemthethweni ethintela ukusetyenziswa kweWiFi kwiChromecast. Idibanisa ngqo kwiRouter nakwisixhobo seChromecast.
I-Geeksphone ivala iingcango ngonaphakade
Ngokuqinisekileyo i-Geeksphone ivala iingcango ukwenza indlela yamaqabane ayo kunye ne-geek! Mna kunye nabanye nge-Silent Circle's Blackphone.
[APK] Umthunywa kaGoogle 1.4 uza nokuthumela indawo, izitikha kunye nokunye
Umthunywa kaGoogle uza nohlobo olutsha, i-1.4, ezisa ukuhanjiswa kwendawo, izitikha kunye nescroll bar kwincoko.
I-LG G4 Beat yenza amatyala nge-5,2-intshi yesikrini kunye ne-Snapdragon 615 chip
I-LG G4 Beat okanye i-G4s ukubheja okusha komenzi waseKorea ukuzisa amanqaku epremiyamu kwiphakheji ekumgangatho ophakathi.
I-HTC, ukuqala kokuphela kwenkampani enkulu
I-HTC kuye kwafuneka ihlaziye uqikelelo lwayo kule kota emva kweziphumo ezibi malunga nentengiso yeemveliso zayo.
I-OnePlus inokuqalisa iinguqulelo ezintathu ze-OnePlus ezimbini
I-OnePlus isenokuba icwangcisa ukwazisa iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo ze-OnePlus ezimbini. Umahluko phakathi kwabo? Imemori ye-RAM
Urhulumente waseRussia upapasha isikhokelo sokubonisa ukuba UNGAYENZI njani i-Selfies. Kwaye ayisihlekisi
Umphathiswa Wezangaphakathi waseRussia upapashe uthotho lweemifanekiso ezibonisa ukuba ungathathi njani i-selfie.
Uvavanyo lwesantya se-Androidsis: LG G2 VS LG G4
Namhlanje sijamelene ne-LG G2 VS LG G4 kuvavanyo lwesantya se-Androidsis. Ngubani oza kuphumelela i-duatidal duel?
Uvavanyo lwesantya se-Androidsis: Namhlanje i-LG G3 VS LG G4
Uvavanyo olukhawulezayo esijamelene nalo i-LG G3 VS LG G4
Isiqalisi sokuSebenza sihlaziyiwe saya kwi-3.5 ngombono omtsha okhawulezayo njengecebo elihle
Isiqalisi sokuSebenza sihlaziywa ngobunewunewu obunje ngeBharbha ekhawulezayo okanye ibar eyenzelwe wena apho ungabeka khona iindlela ezimfutshane kuFacebook okanye kuTwitter.
[APK] Google Play iVenkile ihlaziywa ngophuculo olubonakalayo
Ivenkile kaGoogle yokudlala iyaqhubeka nokubonisa isixa sayo esikhulu seenkcukacha eziphuculweyo ezimbini ezintsha kwimbonakalo yesicelo.
I-OnePlus 2 iza kufika nge-4 GB ye-RAM
I-OnePlus 2, iflegi entsha yenkampani ye-OnePlus, iya kuba ne-4 GB yememori ye-LPDDR4, eyona intle kwintengiso.
Sivavanye ngokucokisekileyo i-LG G4, i-terminal enoyilo olufanelekileyo kwintengiso yangoku
Namhlanje kolu hlaziyo sivavanya kuvavanyo lwe-LG G4 ukukunika olona luvo lwethu lunyanisekileyo lokuba yeyiphi eyona nto isiphelo sendlela esigqibeleleyo se-Android ngalo mzuzu, zombini kuyilo nakwizinto zobuchwephesha kunye nokusebenza okongeziweyo.
IHuawei P8 Lite, kuba umgangatho awunyanzelekanga ukuba ungqubane nexabiso
Sikuzisa uhlalutyo lwe-Huawei P8 Lite, i-jewel entsha ye-Huawei enenjongo yokulawula kuyo kwintengiso yaphakathi. Ngaba iya kuphumelela?
AbakwaSony abanakuze balithengise icandelo labo le-smartphone ngokwe-CEO yalo
U-Sony akaze acwangcise ukuthengisa ukwahlula kwe-smartphone, kodwa ngenye indlela, iya kuqhubeka nokugxila kuyo kule minyaka imbalwa izayo.
Iifoto ezikwi-Instagram ziguqulelwe kwisisombululo esingu-1080 × 1080 kwi-Android
I-Instagram ithathe isigqibo sokwandisa ubungakanani besisombululo semifanekiso ukuya kwi-1080x1080 ukuze ibonise ngcono iifoto esabelana ngazo.
Sele siyazi yonke into malunga ne-Samsung Galaxy Note 5 elandelayo
Ukuvuza okungakumbi malunga ne-Samsung Galaxy Note 5 elandelayo, ngeli xesha siza kukuxelela ukuba imbonakalo yangaphandle iya kuba njani kunye nenye into.
Silindelwe yintoni kwiMinecraft Pocket Edition 0.12
Inguqulelo 0.12 iya kuba lolunye uhlaziyo olukhulu lweMinecraft Pocket Edition. Yaziswa ukusukela nge-MineCon 2015.
Sivavanye ii-headphone ezingenazingcingo ze-Olixar X2 Pro, ii-headphone ezisemgangathweni ze-35,99 ze-Euro kuphela
Namhlanje ndifuna ukukucebisa ngee-headphone ezinokuthanani netekhnoloji ye-bluetooth 4.0 kunye ne-NFC engaphantsi kwe-36 Euro. Igama lakho kunye nemodeli ye-Olixar X2 Pro kwaye sinazo ngokufumaneka kwiMobileFun.es
Ngaba woyika ifowuni yakho? Iingcebiso eziluncedo kunye namaqhinga kwimeko yobusela
Ubusela be-Smartphone buqheleke kakhulu. Ukuthintela, sicebisa ezona zicelo zibalaseleyo zibeka i-smartphone yakho naphi na apho ikhoyo.
Ukuvela kweYouTube ukuya kuthi ga kwi-60fps kwi-Android: ukusuka kwimvelaphi ukuza kuthi ga ngoku.
Sihlalutya ukuvela kweqonga losasazo elithandwayo kwi-Intanethi, iYouTube, ukusuka ekuqalekeni kwayo ukuya kwi-60fps esandula ukongezwa kwi-Android.
Ngexesha elifutshane kakhulu lokwabelana nge-GIFs zoopopayi ezivela kuFacebook Messenger kuya kuba lula kakhulu
I-Facebook ifuna ukwenza kube lula ukuthumela iifayile zemifanekiso ye-GIF koonxibelelwano ngeenkonzo ezimbini ezakhelweyo kunye neqhosha elizinikeleyo.
Imidlalo yeTellTale 'yeMinecraft: Imowudi yeBali iza kwi-Android kamva kulo nyaka
I-Minecraft: Indlela yeNdaba ngemidlalo yeTellTale iya kukusa kwibali elinomdla ngeyona ndawo idumileyo kwihlabathi lakho.
Kungekudala siza kubona iCasio Smartwatch kwintengiso yamanye amazwe
Ngokuka-Kazihuro Kashio, umongameli we-Casio, kunyaka olandelayo u-2016 sizakuba ne-Casio Smartwatch yokuqala, i-smartwatch yokuqala ye-Casio.
I-Oppo Mirror 5s, ibanga eliphakathi kunye noyilo olunomtsalane
U-Oppo usandula ukwazisa nge-Oppo Mirror 5s yefowuni ekumgangatho ophakathi. Isiphelo sendlela esineempawu ezinomdla kunye noyilo
Iifowuni zaseTshayina, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Sikuxelela zonke izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ezinazo ii-mobiles zaseTshayina kwaye ziziphi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uzithenga.
Ngaba ifowuni yakho iba shushu kakhulu? -Iingcebiso zokuyilungisa
Ukuba ifowuni yakho icotha ngenxa yobushushu, nantsi sichaza indlela yokuyilungisa usebenzisa ezona zixhobo zokulawula ubushushu.
Indawo yokuhlala ikhutshwa iya kukhutshwa kwi-Android ngo-Agasti
Nge-Agasti ezayo siza kuba nakho ukufikelela kwiShelter Fallout kwiVenkile yokuDlala ukuze sifunde ukuhlala ukuba kuthetha ukuthini ukuphatha indawo yokuhlala yenyukliya.
Phumelela i-RHA MA750i i-headphone kunye ne-Androidsis entsha
ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwe-Androidsis apho, enkosi ngentsebenziswano ne-RHA, senza i-premium ye-RHA MA750 i-headphone enexabiso lama-99 euros.
Le yifowuni entsha yePanasonic, iPanasonic P55
IPanasonic yaziwa kwihlabathi liphela ngenxa yezixhobo zayo kunye nomabonakude. Ngoku ivelisa i-smartphone ekumgangatho ophakathi, iPanasonic P55.
Ngoku uGoogle ngoku ukhumbula ukuba zeziphi iiapps ofuna ukuzisungula kwimiyalelo ethile yelizwi
IGoogle ngoku iyaqhubeka nokuvela ukuze isinike imvakalelo yokuba ikrelekrele. Ngoku izakukhumbula usetyenziso olukhethiweyo ngomyalelo othile welizwi.
UXiaomi uthengisa ii-smartphones ezizigidi ezingama-34,7 kwisiqingatha sokuqala sika-2015
UXiaomi uneenombolo ezintle zokuthengisa ii-smartphones kwisiqingatha sokuqala, ezifikelela kwizigidi ezingama-34,7. Kulungile inani elihlazo.
Ungayimamela njani i-Apple's Beats 1 radio kwi-Android
Mamela kwisikhululo sikanomathotholo se-Beats 1 se-Apple Music kwisixhobo sakho se-Android ngenguqulo 4.1 okanye ngaphezulu
I-Boomerang, ulwandiso olunomdla lweGoogle Chrome olusivumela ukuba sicwangcise ukuthunyelwa kwee-imeyile ukusuka kwiGmail
Namhlanje ndikubonisa indlela yokucwangcisa ukuthunyelwa kwee-imeyile ukusuka kwi-Gmail enkosi kulwandiso lwasimahla lweGoogle Chrome.
I-AC / DC ngoku iyafumaneka kwiinkonzo zokusasaza umculo njengoMculo woMculo kunye neSpotify
Amazwe e-AC / DC kwiinkonzo ezininzi zokusasaza umculo, kubandakanya Dlala uMculo kunye neSpotify. Umnyhadala womculo.
Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube sele lubonelela ngenkxaso yokudlalwa kwevidiyo kwii-60 fps
Ukusuka kwisixhobo se-Android ngoku ungadlala iividiyo kwiifps ezingama-60 ukonwabela umgangatho obonakalayo obalaseleyo ogxininisa ubumanzi.
Gello, Isikhangeli sewebhu esitsha seCyanogenMod esekwe kwiChromium kunye nokwenza ngokwezifiso
UGello ngumphuhlisi webrawuza yewebhu nguCyanogenMod egxininisa ukwenziwa kwaye isekwe kwiChromium.
Google Earth ibhiyozela iminyaka eli-10 ngenoveli enkulu: uVoyager
I-Voyager ngumaleko omtsha weGoogle Earth ozisa amacandelo amahlanu amangalisayo okufumana ilizwe elisingqongileyo ngenye indlela.
Ukucoca imifanekiso esemthethweni yokunikela ngeMoto G 2015 entsha
Ukunikezela ngemifanekiso ye-Motorola Moto G 2015 entsha kuhluziwe, efika ngenjongo yokuqhubeka nokulawula kuluhlu oluphakathi.
IHuawei inokubonisa iinguqu ezininzi zeHonor 7
Ngoku, njengoko intetho yeHuawei Honor 7 isondela, amarhe malunga nesiphelo esitsha somenzi waseAsia akayeki ukufika.
Iibhentshi ze-Snapdragon 820 ziyavuza
Iibhentshi zeprosesa zeQualcomm Snapdragon 820 ziye zavuza, iQualcomm SoC entsha ethembisa ngokusebenza ngcono kune-810.
Izikrini ze-Splash ziqala ukufikelela kwii -apps zikaGoogle
Izikrini zokwamkela okanye 'iiSplash Screens' ziyavela kwiimephu zikaGoogle nakuYouTube xa isicelo siqala. Ummangaliso ovela kuGoogle.
Le yindlela uGoogle asebenzisa ngayo iirobhothi ukuvavanya isixhobo sakho se-Android ukuba sikwele
UGoogle unerobhothi ezinikele kuvavanyo lwesikrini kunye namaqhosha amaninzi kumacandelo awo.
Le yinkcazo yeDoogee F3 elandelayo
Inkampani esekwe e-China iDoogee ineflegi yayo elandelayo, iDoogee F3, kumda weelekese.
Imbeko 4X, uhlalutyo lwe-phablet entsha yeHuawei
Senza uhlalutyo lwe-Honor 4X, apho sibonisa khona zonke iimfihlelo ze-Honor phablet, i-terminal enexabiso elingenakubekwa emalini
UHugo Barra uthetha ngekamva leXiaomi eUnited States
UHugo Barra, i-CEO yeXiaomi, uphawula ngekamva leXiaomi eUnited States kunye neenkcukacha malunga neempawu zeXiaomi Mi Band entsha
Lungiselela kwangaphambili iqhawe lakho lasimahla ngokusayinela ukufika kwe-MOBA Vainglory ngoJulayi 2
I-Vainglory iya kukhutshwa ngoJulayi 2. Sikubonisa ukuba ulifumana njani iqhawe elithandayo ngokubhalisela ukumiliselwa kwalo kwiwebhusayithi uqobo.
Uhlobo lwe-Android lufumana amandla okwabelana ngesicatshulwa kunye nokujonga kwangaphambili kunye nabahlobo
Inguqulelo entsha ye-Kindle izisa izinto ezimbini ezinomdla kakhulu ekwabelaneni ngokuqeshwa kunye nabafowunelwa bangaphambili kunye nabo ngaphandle kokungena.
I-Snapdragon entsha evela kuthotho lwe-600 ibonakala kumgangatho
Inkqubo entsha ye-Snapdragon 600 yeprosesa ivele kumgangatho. Iprosesa entsha ithembisa ukusebenza okungcono kunye nolawulo olungcono lwebhetri.
Ukuveliswa kwezixhobo zomculo kusetyenziswa iiprinta ze3D
Ukusetyenziswa kwesinye seeprinta ezingama-3d akukho ngaphezulu okanye ngaphantsi kunokwenziwa kwezixhobo zomculo.
I-Monument Valley kunye nokwandiswa kwayo Ida Iphupha simahla kwiAmazon
Ukusuka kwivenkile yeAmazon unokufumana isahluko esitsha Ida's Iphupha kunye neMonument Valley, enye yeyona midlalo yevidiyo ilungileyo.
Ngoku ungashenxisa ii-imeyile kwi-smartphone yakho nge-Inbox ye-Gmail
I-inbox sele inika eli nqaku ukuze isuse ii-imeyile kwifowuni yeselfowuni ka-Android emva kokuyivula kwiintsuku ezidlulileyo kuhlobo lwewebhu.
Facebook Messenger ayizukufuna iakhawunti ye-facebook ukuyisebenzisa
I-Facebook sele ivumela iUnited States, Canada, Venezuela kunye nePeru ukuba zingene kwi-Messenger ngaphandle kweakhawunti ye-Facebook.
IMicrosoft Office ikhutshwe ngokusesikweni kwi-Android
UMicrosoft usandula ukwazisa iOfisi kwi-Android ngokusetyenziswa kweenkqubo ezintathu: iMicrosoft Word, iMicrosoft PowerPoint, kunye neMicrosoft Excel.
[APK] Ngoku i-WhatsApp ikuvumela ukuba ukhangele iincoko zakho kwiscreen esikhulu
Oku kuvumela umsebenzisi kwi-WhatsApp ukuba asebenzise ukukhangela kwiscreen esikhulu ukuze afumane igama okanye ibinzana kwangoko.
UGoogle uqalise uguqulelo lwasimahla lweGoogle Play Music
UGoogle uya kubonelela ngoMculo oDlalwayo simahla ngoonomathotholo kodwa ngentengiso yokukhuphisana neSpotify kunye neApple Music xa ifika ekwindla.
Sele sinabaphumeleleyo abathathu ekuzuzweni amabhaso kwii-akhawunti ezintathu zePodoist Premium ukubhiyozela uyilo lwabo oluhlaziyiweyo kuYilo lweZinto
Ukusuka kwi-Androidsis kunye nokusebenzisana ne-Todoist si-raffle ii-akhawunti ze-3 zepremiyamu ukuze uvavanye zonke izinto ezintle zenguqulo entsha eza noYilo lweZinto.
I-Sony ikhupha i-Android M yoPhuculo loPhuculo lwezixhobo zeXperia ze-17
U-Sony uyaqhubeka nomgaqo-nkqubo wokuvuleka ukuze abaphuhlisi bakwazi ukufikelela kumbono we-Android M kwizixhobo ze-17 ze-Xperia.
I-LEGO Minifigures ekwi-Intanethi ikulungele ukwazisa nge-Android ukuphela kwenyanga
I-LEGO Minifigures kwi-Intanethi ngumdlalo wevidiyo ojolise ekudibaniseni zonke iintlobo zabadlali abavela kumaqonga ahlukeneyo kwilizwe elinye kwi-Intanethi.
UGoogle uqala ukubonisa u "Ok Google" iingcebiso kwibar yokukhangela
Ukusuka kwibha yokukhangela kuGoogle, "OK Google" iziphakamiso zomyalelo ziyavela ukuze kufundiswe umsebenzisi ukuba zeziphi ezikhoyo.
RHA MA750i, ukudibanisa umgangatho kunye noyilo kwii-headphone
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo lwee-RHA MA750i ii-headphone, ezigqityiweyo ezigqwesileyo kunye nomgangatho wesandi odumisa phezulu kuluhlu lwayo.
I-Elephone P9000 ene-4 GB ye-RAM
I-Elephone P9000 elandelayo iza kufika esiphelweni sonyaka nge-4 GB ye-RAM kunye neprosesa yeHelio X20.
AbakwaNokia baya kubuyela kwintengiso ye-smartphone ngo-2016
I-2016 iya kuba ngunyaka wokubuyela kweNokia kwimakethi ye-smartphone ngesixhobo esinokuthi senziwe nge-Android esothusayo.
Izicelo zeFayile ziza kwiDropbox
I-Dropbox izisa into entsha nenomdla kwizicelo zeefayile ukuze sikwazi ukuba nazo zonke iifoto zomtshato kwifolda efanayo.
I-FC30 Pro, sihlalutya i-remote entsha yabathandi be-retro
Sihlalutya umlawuli weFC30 Pro, isixhobo esifanelekileyo sabathandi be-retro kwaye esiya kubavumela ukuba bavuselele ubuqaqawuli obudala bemidlalo yevidiyo
Umsebenzi ongaziwayo weHuawei UK uqinisekisa ukuba baya kwenza iNexus elandelayo
Umsebenzi wase-Huawei wase-UK ongaziwayo uqinisekisile ukuba i-Nexus elandelayo iyakwenziwa yinkampani yase-Asia kwaye izakufika ekupheleni konyaka.
I-beta yomncedisi onyanisekileyo uCortana kaJulayi kwi-Android
Okokugqibela, ukufika kukaCortana kwi-Android kulibazisekile ngokufudukela kuJulayi ukubakho kwe-beta.
IHarththstone Heroes yeWarcraft ifumana uHlaziyo oluKhulu kunye neeTavern Brawls, amaHeroya amatsha, kunye nokunye
Namhlanje i-Hearthstone Heroes yeWarcraft ihlaziyiwe yinguqulelo entsha nenkulu eneendaba ezimnandi ezithetha indlela entsha yokulwa eTarvern.
Indawo yokuhlala iBethesda kwindlela eya kwi-Android
Indawo yokuwa eBethesda iza kwi-Android kungekudala ukuze ikubeke kwindima yokulawula indawo yokuhlala embindini wentlekele yenyukliya.
I-Facebook isungula i-Moments app ukuba yabelane ngeefoto
I-Facebook Moments yinkqubo ezimeleyo ekuvumela ukuba wabelane ngeefoto ngokukhawuleza nangokulula kunye nabantu onxibelelana nabo.
IXiaomi inokwenza iichips zayo, kuqala kuluhlu lweRedmi
Umvelisi waseTshayina uXiaomi, unokwenza iichips zakhe azibandakanye kuluhlu olulandelayo lweeRadio ze-smartphones.
Uluhlu, usetyenziso lweCreative Commons ukufumana iifoto zasimahla
I-Creative Commons iphehlelele uLuhlu lweeapp kwi-Android ukukhangela imifanekiso yasimahla kunye nokusebenzisana ukwenza ibhanki yeefoto zasimahla.
Ukudlala kweYouTube, uYouTube wabadlala umdlalo
UGoogle uzise ngenkonzo entsha yabona basebenzisi beGamer, iYouTube yeMidlalo. Iqonga elingena ukukhuphisana neTwitch eyaziwayo.